‘रातो मासु पोलेर, भुटेर नखाऔं’ – United Reference Laboratory (URL) Pvt. Ltd.
‘रातो मासु पोलेर, भुटेर नखाऔं’
पोखरा, २१ असोज। दसैंमा मासुका विभिन्न परिकार बनाएर खाने सोच बनाउनु भएको छ भने ख्याल गर्नुहोस् पोलेको र भुटेको मासुले क्यान्सरको खतरा बढी हुने हुन्छ।
मासु प्रयोग गर्दा खसी–बोका र राँगाजस्ता रातो मासु हुने र बढी मात्रामा बोसो भएका मासु प्रयोग नगर्न पनि चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। दसैंमा मासुको खपत धेरै हुने रसर्वसाधारणले मासुका विभिन्न परिकार बनाएर खाने प्रचलन छ। जिब्रोको स्वादका लागि खाइने मासुका परिकारले भने स्वास्थ्यमा कति असर गर्छ भन्ने कमैले हेक्का राख्ने गरेका छन्।
भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल अंकोलोजी विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. गुरुशरण साह मासुको खपत कम गर्न सुझाव दिन्छन्। उनले भने–‘सम्भव हुन्छ भने मासु नखाँदा नै राम्रो हुन्छ, तर खानै पर्ने भएमा पनि माछा र कुखुरा जस्ता सेतो मासु खानु राम्रो हो।’ मासुलाई पोलेर वा भुटेर भन्दा उसिनेर खान पनि उनले सुझाव दिए।
मासु ग्याँस वा दाउरामा पोल्दा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुने बताउँदै उनले हाइड्रोकार्बनले पेट, आन्द्रा र छालामा क्यान्सर हुने बढी हुने जानकारी दिए। ‘मासुमा गुलियो पदार्थ र प्रोटिन बढी मात्रामा हुने हुँदा सिधैं आगोमा पोल्दा उच्च तापक्रम उत्पन्न भई त्यसले एक्रिल्यामिडिएस उत्पन्न हुन्छ। जुन क्यान्सर रोग गराउन सहयोगी हुन्छ’–डा साहले भने।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. भोलाप्रसाद रौनियार मुख्य रुपमा पोलेका, तारेका, केमिकलको प्रयोग गरी प्रशोधन गरिएका मासुले क्यान्सर हुन सक्ने बताउँछन्। क्यान्सर लाग्ने मुख्य तत्व कार्सिनोजेनिक यस्तो मासुबाट उत्पादन भई दीर्घकालीन रुपमा मानिसमा क्यान्सर हुने उनको भनाइ छ।
रातो मासुमा बोसो धेरै हुने र त्यसलाई पोल्दा, तेलमा तार्दा र केमिकल मिसाएर बनाइएको मासुले कार्सिनोजेनिक उत्पादन गर्ने हुँदा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुने रौनियारले बताए। यसले आमाशय र ठूलो आन्द्रामा क्यान्सर बनाउन सक्ने हुँदा यस्ता मासु नखानु नै उत्तम हुने उनको सुझाव छ।
धुवाँमा सेकाएका सुकुटी, सेकुवा तेलमा तारेको र मासु प्रशोधन गरेर केमिकल मिसाई बनाइएका परिकारले क्यान्सर निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
मासु प्रयोग हुने बेला सूर्ती, चुरोट, रक्सी, मासु एकै साथ खान नहुने उनको भनाइ छ। अलग अलग खानु भन्दा यसरी खाँदा १५ गुणाभन्दा बढी क्यान्सर हुने सम्भावना रहने डा. रौनियारले बताए। उनले भने–‘धुँवा, मासु र रक्सी एकै ठाउँमा भएपछि यो निकै खतरनाक हुन्छ।’
पछिल्लो समय युवा पिढीमा कोलोरेक्टल क्यान्सर अर्थात् ठूलो आन्द्राको क्यान्सर बढी हुने गरेको रौनियारले बताए। जसको प्रमुख कारण रक्सी, मासु र चुरोट एकै साथ खानु नै हो। खानामा सावधानी अपनाउन नसक्दा अन्ननलीदेखि मलद्वारसम्म क्यान्सर बनाउने रौनियारको भनाइ छ।
दसैंको बेला मासु प्रयोग गर्दा, उमालेर र सामान्य तरिकाले पकाएर मात्रै खानु पर्ने रौनियारको सुझाव छ। उनले मासु बढी खाँदा, रेसादार वस्तुहरुको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए। उनले भने–‘फलफूल, सागसब्जी र रेसादार खानेकुरा बढी खानु पर्दछ।’ आज खाएर भोलि क्यान्सर नहुने भन्दै उनले आज खाएको खानाले दीर्घकालीन रुपमा क्यान्सर हुने बताए।
भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी पनि एकै दिनमा पटक–पटक मासु नखान सुझाव दिन्छन्। उनले भने–‘हल्का खानेकुरा पच्नका लागि १२ देखि १६ घण्टा समय लाग्छ भने मासु पच्न २४ घण्टासम्म लाग्छ। एकै दिन पटक–पटक खाँदा मासु पचाउन समस्या भएर स्वास्थ्यमा असर पर्दछ।’
रातो मासु विस्थापित नै गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। उनले भने–‘मासु खानैपर्ने भए ताजा मासु खानुहोस्।’ मासु राख्दा भुटेर वा फ्रिजमा राख्दा पनि हानिकारक हुने अधिकारीको भनाइ छ।
फ्रिजमा राख्दा कडा संक्रमण फैलिन सक्ने उच्च खतरा हुने बताउँदै उनले भुटेर राख्दा अपच हुने र पेटमा अन्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उच्च खतरा हुने अधिकारीको भनाइ छ।
Previous Article भद्रकालीमा निःशुल्क शिविर
Next Article United Reference Laboratory (URL) Third Anniversary Ceremony